သင့်အဖွဲ့ရဲ့ supervisor ဖြစ်ဖို့ ရာထူးတိုးခံရလျှင် သင့်အဖွဲ့ကို ဘယ်လိုစီမံမလဲ? | Mycanvas
သင့်အဖွဲ့ရဲ့ supervisor ဖြစ်ဖို့ ရာထူးတိုးခံရလျှင် သင့်အဖွဲ့ကို ဘယ်လိုစီမံမလဲ?
လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင်၊ ရာထူးတိုးခြင်းများသည် ခေါင်းဆောင်များ မျှော်လင့်မထားသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် လာတတ်သည်။ တန်းတူညီမျှမှုရှိသော ရာထူးမှ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရခြင်းသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကြားတွင် ယခင်တည်ခဲ့သော သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပင် စိန်ခေါ်နိုင်သည်၊ ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှု၏ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာ ရာထူးတူအလုပ်ဖော်ဟောင်းများကို ကြီးကြပ်ရန် သင်ယူခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
သင့်အခန်းကဏ္ဍအသစ်သို့ သင်ဝင်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ အကူးအပြောင်းကို ဖြေလျှော့ရန် ဆက်သွယ်ရေးသည် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဤဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုရှစ်မျိုးသည် ရာထူးတိုးထားသောခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်းတို့ယခုစီမံခန့်ခွဲသူများကြားတွင် သြဇာအာဏာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကာ ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေသည်။
သင်သည် ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုအတွက် ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သင့်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုအတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ တောင်းပန်မှုပေးစရာမလိုပါဘူး။ သင့်ရဲ့ရာထူးအသစ်နဲ့ သင့်ကိုရာထူးတိုးဖို့ သင့်ခေါင်းဆောင်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ယုံကြည်မှုရှိပါစေ။ အကယ်၍ ယခင်ရွယ်တူများသည် မသေချာမရေရာမှု သို့မဟုတ် ယုံကြည်မှုအလွဲအချော်တစ်ခုခုကို သင့်ရှိက ခံစားမိပါက သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် သင်၏တာဝန်အသစ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှုအပေါ် ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အခြားသူများကို လိုက်လျှောက်ရန် နှိုးဆော်ရန် ယုံကြည်မှု လိုအပ်သော်လည်း နှိမ့်ချမှုသည် ထပ်တူထပ်မျှ အရေးကြီးပါသည်။ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းများသည် ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနေရကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါ၊ သင်နှင့်ယခင်က ၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်မှုပုံစံသည် ကွဲပြားခြားနားစွာရှေ့ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါ။ လူတွေက သင့်ကို အရင်ကထက် ပိုစောင့်ကြည့်လာကြတယ်။” အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ပျက်စရာများကိုပင် ဂရုတစိုက် နားထောင်ပါ။ သူတို့စိုးရိမ်နေပါစေ သူတို့ကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါ။ သင်ယခုရရှိထားသောအခန်းကဏ္ဍကို အခြားသူများမှ စိတ်ဝင်စားပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ခက်ခဲသောခံစားချက်များ ခံစားရနိုင်သည်ကို နားလည်ပါ။
3. မကြာခဏ ပြောဆိုဆက်ဆံပါ။
သင့်အမြင်ကို သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းများနှင့် မျှဝေပြီး ၎င်းတို့၏ အကြံပြုချက်ကို တောင်းဆိုပါ။ သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို လေးစားကြောင်း သူတို့ကို အသိပေးပါ။ ရည်မှန်းချက်များနှင့် ဦးစားပေးများကို မကြာခဏမျှဝေပါ။ အောင်မြင်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်ဖို့ လူတိုင်းလိုအပ်တဲ့အရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိပါစေ။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးစီနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးရန် တစ်ဦးချင်းတွေ့ဆုံမှု ပြုလုပ်ပါ။ သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဦးစားပေးပြီး သူတို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အရာတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ ကတိပြုပါ။
သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးကို သင်ဖန်တီးနိုင်ခြေများသည်။ သင်ဘာကို တွန်းအားပေးသလဲ၊ သင်အောင်မြင်အောင် လုပ်နေတာနဲ့ သင့်ရဲ့ အားနည်းချက်က ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သူတို့ သိတယ်။ သင်သည် ခေါင်းဆောင်မှုရာထူးတစ်ခုသို့ တက်လာပြီး သင်ယခင်က သိထားသည့် အခြေခံကျသော ကဏ္ဍများကို ပြောင်းလဲရန် စတင်ကြိုးစားပါက ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့် ယုံကြည်မှုကို စိန်ခေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်သင် စစ်မှန်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါစေ။ သင်တိုးတက်လိုသော နယ်ပယ်များနှင့် သင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိရှိ ဝန်ထမ်းများအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ မျှဝေပါ။ သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အသစ်အနေနဲ့ သင်ဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ခံယူလိုကြောင်း သူတို့ကို အသိပေးပါ။
သြဇာရှိခြင်းသည် သင်၏ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိရန် လိုအပ်သည်။ တသမတ်တည်း ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းသည် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးတိုင်းအတွက် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ တခြားသူတွေနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောပါ။ သင့်ထံမှ အခြားသူများ ယုံကြည်လာပြီး မျှော်လင့်လာစေရန် တသမတ်တည်းရှိသော ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကို ပြသပါ။
6. အတင်းအဖျင်းပြောခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ယခုသင်သည် အခွင့်အာဏာတစ်ခုရနေပြီဆိုလျှင် သင်၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုသည် ယခင်ကနှင့်မတူဘဲ စိစစ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ယခင်က တီထွင်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း ဆူညံသံများထက် သင့်အား မြင့်တက်စေမည့် နယ်နိမိတ်များ ထူထောင်ရန် လုပ်ဆောင်ပါ။ အတင်းအဖျင်းစကားအားလုံးကို ရှောင်ရှားရင်း သင့်ချဉ်းကပ်နိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။ အလုပ်ခွင် ဒိုင်းနမစ်ဘောင်အတွင်းတွင် သင်၏အကြံဉာဏ်ကို သီးသန့်ရှာဖွေနေသည့် ဝန်ထမ်းများတွင် ကွဲပြားမှုရှိသော်လည်း အခြားသူများကို လွှမ်းမိုးရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ ရုံးတွင် အတင်းအဖျင်းပြောခြင်းသည် နေရာမရှိပေ။ သင့်ထံ ရင်ဖွင့်သည့်အရာသည် သင့်ရာထူးအသစ်၏ နယ်ပယ်အတွင်းတွင် ရှိနေကြောင်း လူတိုင်းသိကြောင်း သေချာစေပြီး သင့်လျော်စွာ ကိုင်တွယ်မည်ဖြစ်သည်။
7. သင်၏ အောက်ခြေများကို သတိရပါ။
အရင်က အတွင်းလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို အမှတ်ရစေတဲ့အရာကို သင်သိပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အရာနှင့် ယခင်က လူကြိုက်မများဟု ယူဆထားသည့်အရာများအတွက် သင့်တွင် ထူးခြားသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသည်။ ဤအချက်အလက်ကို မှတ်သားပြီး သင့်အရင်ကထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အဖွဲ့လိုက် တက်ကြွမှုကို ဖန်တီးရန် ၎င်းကို အသုံးပြုပါ။ ဝန်ထမ်းများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် အခွင့်အာဏာပေးပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လွှမ်းမိုးရန်နှင့် အဖွဲ့လိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဘုရင်အဖြစ် ၎င်းတို့အား အခွင့်အာဏာပေးပါ။
8. နည်းပြတစ်ဦးကို စဉ်းစားပါ။
ယခု ရာထူးအသစ်သို့ ရာထူးတိုးခြင်းခံရပြီး သင့်လုပ်ငန်းခွင်ကို ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရော ဝန်ထမ်းတွေရော သင့်ဆီက တခြားသူတွေပါ မျှော်လင့်ချက်တွေ တိုးလာမယ်။ အရင်က သင့်ကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာက အာဏာပိုင်အခန်းကဏ္ဍမှာ အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ သင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို တိုးမြှင့်လိုပါက၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးကို ပြောင်းလဲခြင်း၏မူဘောင်ကို လမ်းညွှန်ပြီး အနာဂတ်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများအတွက် သင့်ကိုယ်သင် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါ။
Operated by TVP Career Co., Ltd.
Copyright @ 2022 TVP Career Co., Ltd. All rights reserved.